On: June 08Author: adminIzigaba: Android, Cell Ucingo Spy, Cell Ucingo Spy yekhuphoni, Cell Ucingo Tracking, Employee Ukuqapha, Faka Hambayo Spy, IPHONE, iPhone ngeti-5 kuya Spy Software, Hambayo Ucingo Ukuqapha, Spy Mobile, Ehambayo Spy Online, Gada Inthanethi Sebenzisa, Control Zomzali, Spy Facebook Messenger, Spy For Android, Spy For iPhone, Spy iMessage, hlola Hambayo ze-smartphone, Inhloli Izingcingo, Inhloli SMS, Spy Skype, Spy Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Indawo Ayikho Amazwana
Lokusebenza ukubheka imiyalezo IPHONE Free
exactspy-App ukubheka imiyalezo iPhone Khulula ine konke okudingayo for asihlola amadivayisi siqu. SMS kunikwe isevisi ebalulekile nge exactspy-App ukubheka imiyalezo iPhone Khulula futhi ungathola ngokuqukethwe ogcwele umyalezo ngalinye (Aphumayo noma angenayo) ngalolu software. It kweso ikunika umamukeli noma umthumi ulwazi zonke umyalezo, kuhlanganise usuku nesikhathi.
exactspy-App ukubheka imiyalezo iPhone Khulula kuhambisana 5 day imali emuva isiqinisekiso futhi uma kwenzeka, ungagculisekile, ungathola lo imali. Nokho, lolu hlobo simo bekungeke ongasoze wadala njengoba uzothola idatha fledge egcwele imiyalezo ye mobile umyeni wakho. Ngempela ithuluzi efanele yokuba ukususa lanoma yiluphi uhlobo nezindaba engqondweni yakho. Ungathola ukufinyelela okugcwele ku-textbox futhi kukhona kungaba lutho kuwe nganoma iyiphi indlela.
Udinga nje kuphela ukufinyelela ngokomzimba ukuze idivaysi ofuna ukuba inhloli futhi uma kwenzeka ka iPhone, JailBreak yisidingo ngaphambi. It ingafakwa kalula futhi uyothola imininingwane lonke kwi system yakho. Ukhokha imali encane ukuze uthole imiyalezo ye mobile umyeni wakho akuyona into enkulu futhi exactspy-App ukubheka imiyalezo iPhone Khulula yiyona indawo enhle kakhulu ukukwenza.
Indlela ukubheka imiyalezo on iPhone 5
With exactspy-App ukubheka imiyalezo iPhone Khulula wena uzokwazi:
Lokusebenza ukubheka imiyalezo IPHONE Free, Insiza ukulandelela imiyalezo on android, Insiza ukulandelela imiyalezo on kwenye ifoni, Indlela ukulandelela imiyalezo on iphone 4s, Indlela ukubheka imiyalezo on iPhone 5